JBL na - enye ndị ọkà okwu ọhụụ enwere ike | Akụkọ akụrụngwa
JBL bụ otu n'ime ndị nrụpụta nwere ọrụ dị mkpa n'ụwa nke ụda dị mma. JBL, ụlọ ọrụ nke so na HARMAN International, nke Samsung nwe, ejirila usoro CES wepụta ụdị okwu ọhụụ atọ, ha niile nwere ike ibugharị na nke ahụ na-enye anyị ohere iwere ha ebe ọbụla a na-eme oriri.
Soundda a na-ebugharị ebugharị na ụwa nke ụda ma ọtụtụ ndị na-emepụta na-ahọrọ ụdị ngwaahịa a, ngwaahịa ndị n'ọtụtụ ọnọdụ na-enye anyị iguzogide mmiri, igwe mkpọtụ na-akagbu, njikọ Bluetooth ... Modelsdị ọhụrụ nke JBL gosipụtara bụ: JBL GO 2, JBL Clip 3 na JBL Xtreme 2.
1 JBL Gaa 2
2 JBL mkpirisi 3
JBL Gaa 2
The JBL GO 2 na-enye anyị ọkà okwu nwere njikọ bluetooth, mmiri na-enweghị nnukwu arụmọrụ yana yana ihe mara mma nke mere na nnọkọ ahụ anaghị akwụsị n'oge ọ bụla. Ekele maka teknụzụ JBL Akara Mbinye aka, ikike nke JBL GO ruru awa ise. Site na nchedo IPX5, anyị nwere ike were egwu kachasị amasị anyị soro ebe ọ bụla anyị nọ, ma ọ bụrụ na ọdọ mmiri, n'ụsọ osimiri, na snow, n'ọhịa. N'ihi igwe okwu etinyere n'ime ya, anyị nwere ike ịme ma nata oku n'ụzọ dị mfe yana ogo dị mma.
JBL GO 2 ga-aga ahịa na mmiri 2018 ọ ga-adị na agba ntụ, Mint, odo, tan, champeenu, nwa, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, oroma na ọbara ọbara. Ọnụ ya ga-abụ 34,99 euro.
JBL mkpirisi 3
The JBL Clip 3 na-enye anyị egwu egwu na-aga n'ihu maka awa 10 yana a mma mma na arụmọrụ ma e jiri ya tụnyere onye bu ya ụzọ. Da ahụ bara ọgaranya karịa na-agbanyeghị na ha bi n ’otu kọmpat. Site na igwe okwu agbakwunye anyị nwere ike ịkpọ oku n'ụzọ doro anya site na mkpọtụ mkpọtụ na mgbagha nke ọ na-etinye. Dị ka ụdị JBL GO 2, ekele IPX7 na-eguzogide, anyị nwere ike iburu ọkà okwu a ebe ọ bụla, ekele maka karabiner nke nwere rọba nke na-enye anyị ohere ijide ya na ebe na-amị amị.
JBL Clip 3 ga-aga ahịa ahụ n'oge opupu ihe ubi nke 2018 na ego 59,99 euro. Ihe nlereanya a ga - adịkwa na agba dị iche iche: ojii, acha anụnụ anụnụ, ọbara ọbara, tii, isi awọ, pink, ọcha na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ha niile nwere carabiner dabara.
Ihe ọhụrụ JBL Xtreme 2 na-enye anyị nnwere onwe nke awa iri na ise na-enweghị nkwụsịtụ yana ogo ụda dị mma, yana bass mara akara. N'ihi nnabata nke ihe ntanetị 15D bass ọhụrụ na ndị ọkwọ ụgbọala emelitere, ndị ọrụ nwere ike ịnụ ụtọ ụda ya dị ike nke ga-ejupụta ụlọ ebe anyị nọ. JBL Jikọọ + teknụzụ na-enye ndị ọrụ ohere ikuku jikọọ 100 ma ọ bụ karịa dakọtara okwu ịgbasa playback ahụmahụ.
Ihe okike ya, ya na IPX7 na-eguzogide mmiri, jikọtara ya na mkpuchi siri ike, nko jikọtara ya na isi igwe na-eguzogide ujo. JBL Xtreme 2 webatara mkpọtụ na ikwughachi igwe okwu igwe nke anyị ga-eji nwee mkparịta ụka na-enweghị aka na nghọta zuru oke ma doo anya. Mbata na ahịa nke A haziri ihe nlereanya a maka oge okpomọkụ a ma mee ya na ọnụahịa nke euro 299 na oji, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha anụnụ anụnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » JBL na-enye ndị ọkà okwu ọhụụ ọhụụ